Icandelo lokufumana idatha Abavelisi-eTshayina abaThengi beZiko lokuFumana idatha, abaFundi
Ukugxila kwe-DJGZ23-SW10 yeyona mveliso ye-smart yakhutshwa nguSenwei. Idibanisa iteknoloji yanamhlanje yokuthetha ngonxibelelwano, itekhnoloji yetekhompyuter, itekhnoloji yokulinganisa amandla. I-Adopt GPRS (CDMA okanye inethiwekhi ebanzi) kunye nesikhululo esikhulu sokujonga ukuhanjiswa kwedatha, ukuqonda ukuqokelelwa kwedatha ngesampuli ekhawulezayo ye-AD, kunye nokuqonda ukugcinwa kwedatha, ukurekhodwa kwedatha kunye nokugcinwa kwedatha ngokusebenza kweprosesa ephakathi.
I-SW-TCP232-304 iseva ye-serial ye-RS485, ubungakanani obuncinci, iindleko ezinokuhlawuleka, qaphela i-RS485 kwi-Ethernet yokufuna ukucacisa umsebenzi wokuhambisa; nge-1 Ethernet port, i-10 / 100Mbps ireyithi; ukuseka ixesha lokuqalisa ukusebenza kwakhona, i-DHCP ifumane ngokuzenzekelayo i-IP DNS ukulungiswa kwegama lesizinda, ukuphuculwa kwendawo ekude, umsebenzi wesibuko ocacileyo; xhasa idatha yesiko lokubetha ukuze kupheliswe amakhonkco angenamsebenzi; iphakheji yobhaliso ngokwesiko ukufumana imeko yonxibelelwano.
I-SW-GPRS232-734 yi-RS485 yokuhambisa amandla okusasaza isiphelo se-GPRS DTU, eqonda umsebenzi othumela izinto ezimbini ngokucacileyo ukusuka kwi-RS485 ukuya kwi-GPRS; ixhasa ukufikelela kwenethiwekhi ye-GSM / GPRS; Ukukhuselwa kokujikeleza kwesekethe kwe-RS485, namandla okulwa nokuphazamiseka; ixhasa iseshini ezi-4 zeSocket ngaxeshanye kwi-intanethi; ixhasa i-TCP, UDP; ukuxhasa ukuhanjiswa okucacileyo kweSMS, ukuhanjiswa okungabonakaliyo kwenethiwekhi, i-HTTPD, i-UDC kunye nezinye iindlela; xhasa isiseko semiyalelo esisiseko kunye neseti yomyalelo eyandisiweyo; xhasa i-5-36V yevolthi ebanzi, DC kunye neendlela zesiphelo zombane.